Indiza ye-EgyptAir ibuyela eCairo emva komyalezo osongelayo ofunyenweyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Indiza ye-EgyptAir ibuyela eCairo emva komyalezo osongelayo ofunyenweyo
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zase-Egypt eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Iindaba zaseRashiya eziQhekezayo • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Indiza ye-EgyptAir ibuyela eCairo emva komyalezo osongelayo ofunyenweyo.
Indiza ye-EgyptAir iMS 729 ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya saseCairo ngenxa yomyalezo osongelayo ovela kumntu ongaziwayo oshiywe kwesinye sezihlalo zenqwelomoya.
Indiza ye-EgyptAir i-MS729 ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya saseCairo ngenxa yomyalezo ogrogrisayo ovela kumntu ongaziwayo.
Inqwelomoya ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya sokuhamba kwimizuzu engama-22 emva kokunduluka kwaye yahlala ngokukhuselekileyo.
Inqwelo moya yabakhweli iAirbus A220 isuka eCairo isiya eMoscow yakhala ialarm phezu koLwandle lweMeditera.
Indiza ye-EgyptAir MS 729, ihamba isuka eCairo ukuya eMoscow, iRashiya, kwanyanzeleka ukuba ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya saseCairo emva kokuba kufunyenwe umyalezo osongelayo kwesinye sezihlalo kwindlwana ephambili.
"Inqwelomoya i-MS 729 ibuyile ngenxa yomyalezo osongelayo ovela kumntu ongaziwayo oshiywe kwesinye sezihlalo zenqwelomoya," EgyptAir kuchazwe kwingxelo.
"Inqwelomoya ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya emva kwemizuzu engama-22 kwaye yahlala ngokukhuselekileyo, onke amanyathelo ayimfuneko ayathathwa."
Inqwelo moya yabakhweli iAirbus A220 isendleleni esuka eCairo ukuya eMoscow yakhala i-alam malunga nesiqingatha seyure emva kokuhamba kwayo, sele iphezu koLwandle lweMeditera. Emva koko, inqwelomoya ibuyele kwisikhululo seenqwelomoya saseCairo.
Ngokutsho kwemithombo yeenqwelo-moya, iziganeko ezinjalo zenzeka izihlandlo eziliqela ngonyaka. Njengomthetho jikelele, imiyalezo enjalo ijika ibe yiprank yomntu.
Nangona kunjalo, ngokwemigaqo yeenqwelo-moya, inqwelomoya kufuneka ihlale kuyo nayiphi na imeko.
Xa ifika, inqwelo-moya yayiza kuhlolwa ngenyameko ngokuvumelana nemithetho yokhuseleko, abakhweli nemithwalo yabo yayiza kujongwa, baze bafakwe kwenye inqwelo-moya.